Clicky က Google Gadget ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည် Martech Zone
Clicky က Google Gadget ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်
သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 5, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
မင်းဘလော့ဂ်ကိုအချိန်အတန်ကြာဖတ်နေတယ်ဆိုရင်မင်းကငါပဲဆိုတာမင်းသိတယ် Clicky Web Analytics ၏ပရိသတ်ကြီး။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်း။ ပေါ့ပါးပြီးအဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့သော Web Analytics ပရိုဂရမ်သည်ဘလော့ဂ်များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ငါအရမ်းနှစ်သက်တာကြောင့် WordPress plugin ကိုတောင်ရေးခဲ့တယ်။
Scott Falkingham မှ iGoogle Clicky Dashboard မှလာသည် စပ်စုသဘောတရား:
အပေါငျးတို့သလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုယူပါ Clicky နှင့်ကောင်းတဲ့ Gadget ကို၌သွင်းထား! ဝိုး! သင်၏ iGoogle စာမျက်နှာတွင်လည်း Google Gadget ကိုသုံးစရာမလိုပေ။ Google Gadgets တွေကို script သေးသေးလေးနဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုထားနိုင်ပါတယ်။ ငါ Gadget ကိုအရမ်းသဘောကျတဲ့အတွက် WordPress plugin ကို update လုပ်ပြီး Sean ဆီကိုပို့လိုက်တယ်။ သူ Gadget ထည့်သွင်းထားသော Admin plugin အသစ်ကိုလွှတ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Gadget ရဖို့၊ sign up လုပ်ပါ Clicky။ Google Gadget နှင့် WordPress plugin တို့ကို Goodies စာမျက်နှာတွင် download ရယူနိုင်သည်။
Tags: ဒါဝိဒ်သည် Siteman ပန်းကုံးပိုမြန်စမတ်ကျပိုမြန်ထိပ်ဆုံးသို့Twitter စျေးကွက်
Internet Explorer သည်၎င်း၏အသုံးဝင်မှုကိုပြန်လည်စဉ်းစားသည်
PHP and MySQL: Quimer တစ်ခုသို့ Tab Delimited File တစ်ခုသို့ပို့ပါ
5:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 11, 44
ငါကလစ်နှိပ်လိုက်တာကိုနှစ်သက်တယ်။ ငါမကြာသေးခင်ကငါ့ဘလော့ဂ်ကိုထည့်လိုက်တယ်။ ငါက user interface နဲ့ metric တွေကိုအရမ်းသဘောကျတယ်။ ငါက Google Analytics ကိုပိုပြီးသဘောကျတယ်၊ ငါထင်တာကတော့ Google Analytics ကသတင်းအချက်အလက်တွေကိုသူတင်ပြတဲ့နည်းနဲ့ပဲ။
6:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 6, 12
Dustin ဟာကျွန်တော်ကြိုက်တာအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။ ငါသည်လည်းဂူဂဲလ် Analytics ကိုအနီးကပ်စောင့်ရှောက်သည် - ငါသည်အထူးသဖြင့်တိကျသောအချိန်ကာလများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုပြုလုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုသဘောကျသည်။ Flash-based graphing သည်အလိုလိုသိသည်။
GA ကိုရေထဲမှထုတ်ပစ်လိုက်သော Clicky လုပ်သည့်အရာများထဲမှတစ်ခုသည် downloads များကိုခြေရာခံနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆိုက်တွင်ဥပမာများမကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။
8:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 9, 53
ငါကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။ css ကိုအမွေခံရသည့် site ပေါ်တွင်ဖော်ပြရန် clicky မှလူကြိုက်များသောပို့စ်များကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်လျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ် ပို၍ နှစ်သက်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်သည် coder မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်တစ်စုံတစ်ယောက်ကဤသို့ပြုလုပ်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါလိမ့်မည်။